Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Kedu ihe bụ MVP yana otu esi etinye ya na imewe akụrụngwa
Ị nwere ike ịnụla gbasara MVP - Ngwaahịa kacha arụ ọrụ - yana ikekwe jikọtara ya na ngwanrọ. N'ezie, echiche a na -emetụtakwa ngwaike. N'isiokwu a, ị ga -amụ maka MVP wee chọpụta otu ị ga -esi jiri ya rụọ ọrụ n'ichepụta ngwaahịa eletrọnịkị gị.
Mmadụ nwere ike belata mmefu na oge maka imewe wee mepụta atụmatụ nwere atụmatụ kacha nta.
Iji ụkpụrụ MVP ga -enweta ozi ndị ọzọ gbasara mmasị ndị ahịa.
MVP bụ ngwaahịa ejiri obere mbọ mee.
O doro anya na imepụta na imepụta ngwaahịa, ma ọ bụ ngwanrọ ma ọ bụ ngwaike, chọrọ mgbalị na ọnụ ahịa. N'ọnọdụ mgbe ngwaahịa dị ọhụrụ ma ọ bụ na ejighị n'aka maka echiche ndị ahịa gbasara ya, ị nwere ike belata ọnụ ahịa na oge maka imewe wee mepụta ngwaahịa nwere atụmatụ kacha nta. Dị ka o kwesịrị ịdị, imepụta ngwaahịa ị nwere ike were ihe ndị ahịa gị chọrọ ma dị njikere ịkwụ ụgwọ ya. Maka nke a, ị nwere ike iji ụkpụrụ MVP wee nweta ozi ndị ọzọ gbasara mmasị ndị ahịa. Site n'ime nke a, ị ga -anakọta nzaghachi n'aka ndị ahịa mbụ gị. Nke a na -enye gị ohere ịzụlite ngwaahịa gị n'ọdịnihu na -adabere n'àgwà ndị ahịa. Yabụ, MVP bụ ngwaahịa ejiri obere mbọ mee.
Kedu otu esi eji MVP na ngwaike?
N'ụzọ bụ isi, ojiji nke echiche a adịghị iche na nhazi ngwaike. Nke mbụ, ị kwesịrị ikpebi ezigbo atụmatụ maka ngwaahịa gị. Buru n'uche na njirimara nke ọ bụla ga -eme ka ngwaahịa gị dị mgbagwoju anya yana, yabụ, ọnụ ahịa na mbọ maka imepụta ya. Iji zere ịgbakwunye ọtụtụ atụmatụ, họrọ. Maka mmalite, ị nwere ike depụta atụmatụ ọ bụla nwere ike maka ngwaahịa gị, debe ha n'usoro dị mgbagwoju anya yana ọnụ ahịa wee buru ụzọ tụlee mkpa ndị ahịa echere.
Na -esote, chọpụta ọnụ ahịa na oge maka mmepe nke atụmatụ ọ bụla yana, n'ikpeazụ, ọnụ ahịa ngwaahịa gị. Chọta nguzozi n'etiti ọnụ ahịa nrụpụta yana ọnụahịa maka ngwaahịa gị. A na -atụ aro ka ị lekwasị anya na njirimara ndị ahụ ị kwenyere na ọ ga -agbakwunye oke uru kacha na ngwaahịa gị.
Mgbe ị debere atụmatụ ndị ahụ, wepu ndị nwere oke mgbagwoju anya na ọnụ ahịa site n'elu ndepụta gị. Enweghị ike ịhazi atụmatụ dị mgbagwoju anya na ọnụ ọnụ maka MVP. Kama nke ahụ, chọpụta atụmatụ na-efu ọnụ nke nwere mkpa ndị ahịa dị elu. MVP kwesịrị ịgụnye atụmatụ dị mfe na ọnụ ala.
Na -esote, nweta ngwaahịa kacha nta enwere ike n'ahịa ozugbo enwere ike. Echiche bụ isi nke MVP dabere ọ bụghị naanị na ọnụ ahịa kacha nta kamakwa na obere oge etinyere na imepụta ngwaahịa mbụ. Yabụ, chekwaa oge gị wee gaa n'ihu mụta mkpa ndị ahịa. Ị nwere ike ịnakọta nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa site na ire ahịa yana data ahịa dị iche iche. A ga -eji data a maka ụdị ngwaahịa gị n'ọdịnihu nke ga -egbo mkpa ndị ahịa. N'otu oge ahụ, na -eji nzaghachi ị nwere ike kpebie ịzụlite ngwaahịa dị iche. Buru n'uche na a ga -ewepụ ụfọdụ atụmatụ adịghị mkpa nke MVP gị na ụdị ngwaahịa ọhụrụ gị.
Yabụ, MVP na -enye ohere itinye obere oge na ọnụ ahịa na imepụta ngwaahịa, na -anakọta nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa n'ezie na ịhazigharị ngwaahịa gị na nzaghachi. Gụọ ọzọ edemede na imewe elektrọnik.